FAA’IIDO IYO QASAAROOYIN HADDAY EYDA DHAQMAYAAN - EEYAHA
Faa’iido iyo Qasaarooyin hadday eyda dhaqmayaan
Taranka cunsurigu waa isku darka eyda aadka isugu dhow, tusaale hooyo / wiil, aabe / gabar iyo walaalihiis / walaalihiis. Kuwa sameeya, waa hab faa'iido leh oo lagu hagaajiyo astaamaha astaamaha - hiddo-wadaha eyda bandhigga qaarkood waxay muujinayaan in qaar badan oo ka mid ah aabayaashood ay si dhow isugu dhow yihiin. Tusaale ahaan, waxaa jira bisad caan ah oo lagu magacaabo Fan Tee Cee (oo muujisay sannadihii 1960-meeyadii iyo 1970-yadii) oo ka soo muuqatay abtirsiinno siyaad ah oo Siamese ah, mararka qaarna dhowr jeer hal abtirsiin, maadaama ay kuwa wax dhaqda ay aad uga walwalsanaayeen inay khadadkoodu badsadaan nooc Tijaabooyinka heer sare ah ayaa had iyo jeer si aad ah loogu raadiyaa adeegyo istiraatiijiyad ah ama farac (haddii aysan hore u aheyn mid dhexdhexaad ah!), Iyagoo ku guuleystay oggolaanshaha garsoorayaasha bandhigga.
Si kastaba ha noqotee, hida-dhaqashada waxay haysaa dhibaatooyin iman kara. Isku-xirka xaddidan ee hidda-wadaha ee ay sababtay sii wadista taranka micnaheedu waa in hiddo-wadayaasha tirtirmay ay faafaan oo noocyadu ay lumiyaan xooggooda. Bixiyeyaasha xayawaanka shaybaarka waxay ku tiirsan yihiin tan si ay u abuuraan noocyo isku mid ah oo xayawaan ah oo ka hortagga niyad-jabka ama runta u ah cillad gaar ah, tusaale ahaan. suuxdin. Xayawaanada noocan oo kale ah ayaa loo yaqaan 'genetical genes' (isku dhejin!), Xaalad caadi ahaan lagu arko kaliya mataano isku mid ah. Sidoo kale, qadar xakameyn ah oo ah taranka ayaa loo isticmaali karaa in lagu xaliyo astaamaha suurad wacan ee xoolaha beeraha, sida. soosaarka caanaha, saamiga caatada / baruurta, heerka koritaanka, iwm.
italian greyhound chihuahua oo iib ah
Dhacdo Dabiici ah ee Ku-dhalashada
Tan macnaheedu maahan in taranka taranka uusan ku imaan si dabiici ah. Xirmo yey ah, oo ka go'doonsan xirmooyinka kale ee yey, juqraafi ahaan ama arrimo kale, ayaa noqon kara mid aad u hidde ah. Saamaynta hiddo-wade kasta oo baabi'iya waxay noqotaa mid la ogaan karo jiilalka dambe maaddaama inta badan carruurtu dhaxlaan hiddo-wadahaas. Saynisyahannadu waxay ogaadeen in yeeydu, xitaa haddii ay ku nool yihiin meelo kala duwan, hidde ahaan aad isugu eg yihiin. Suurtagalnimada in cidlanaanta deegaankeeda dabiiciga ahi ay si weyn hoos ugu dhigtay tirooyinka yeeyda waqtiyadii lasoo dhaafay, taasoo abuureysa culeys hidde ah.
Yeyda, la'aanta kala duwanaanta hidde-wadaha ayaa ka dhigeysa kuwo u nugul cudurka tan iyo markii ay la'yihiin awood ay isaga caabiyaan fayrasyada qaarkood. Taranka xad-dhaafka ah wuxuu saameeyaa guushooda taranka iyagoo leh qashin yaryar iyo heerarka dhimashada sare. Saynisyahanada qaar waxay rajeyneyaan inay horumarin karaan barkado hiddo-wadayaal badan oo kala duwan iyagoo soo bandhigaya yeyda meelo kale ka socota baakadaha yeyda lagu cuno.
Xayawaan kale oo ka cabanaya waxyeelada isirka ayaa ah baandada weyn. Sida yeyda oo kale, tani waxay horseeday taranka liita ee baandooyinka iyo heerarka dhimashada dhallaanka oo sarreeya. Maaddaama dadyowga panda ay ka go'doonsan yihiin midba midka kale (sababo la xiriira bini'aadamka oo xannibay waddooyinkii ay pandasku mar ka guuri jireen aag kale una guuri jireen), baandooyinka ayaa dhib weyn ku qaba helitaanka lamaane leh hiddo-wadayaal isku dhafan oo si tartiib tartiib ah u dhasha.
Bisadaha go'doomin dabiici ah iyo ku-noolaashaha abuurku waxay keeneen taranka guryaha sida Manx oo ku soo kordhay jasiirad si hiddo-wadaha dabada la'aanta ahi u fiday inkasta oo dhibaatooyinka la xiriira. Marka laga reebo markabka yaabka leh ee ku boodaya Isle of Man, waxaa jiray wax yar oo xad dhaaf ah oo saameynta taranka taranka ayaa ka muuqata qiyaaso yar-yar-celcelis ah qashin qubka (cilmi-yaqaannada hiddo-wadaha ayaa rumeysan in kittens-ka Manx ka badan intii markii hore loo maleynayay in dib loo cusbooneysiiyay sababo la xiriira hidde-xumo aan caadi ahayn), umulinta iyo cilladaha lafdhabarta taas oo soosaarayaasha dadaala ay si aad ah uga shaqeeyeen in laga takhaluso.
Qaar ka mid ah gumeysiga duurjoogta ah ayaa noqda kuwo aad u hiddeysan sababo la xiriira inay ka soocan yihiin bisadaha kale (tusaale, beer fog) ama sababta oo ah asxaabta kale ee aagga ka jira waa la dhexgalay, iyaga oo ka saaraya barkadda hidda-wadaha. Inta badan shaqaalaha bisadaha ee la tacaalaya xayawaannada ayaa la kulmay qaar ka mid ah saameynta taranka. Deegaanadaas dhexdooda waxaa jiri kara wax ka sareeya celceliska dhacdooyinka qaarkood. Qaarkood ma culus yihiin, tusaale ahaan. u badnaan bisadaha qaab calico ah. Astaamaha kale ee laga dhaxlo ee laga heli karo tiro ka badan celcelis ahaan tirada gumeysiga la soo qaaday waxaa ka mid ah polydactyly (kiiska ugu daran ee illaa iyo hadda la soo sheegay inuu yahay bisad Mareykan ah oo leh sagaal cagood oo lugo kasta ah), dwarfism (in kasta oo bisadaha dhediga ah ee aadka u liita ay dhibaatooyin la kulmi karaan markay isku dayayaan inay umulaan) kittens sababo la xiriira cabirka madaxa ee kittens-ka), cilladaha kale ee dhismaha ama saadaalinta xaaladaha qaarkood ee laga dhaxli karo.
Natiijada kama dambaysta ah ee sii socoshada hidde-wadaha ayaa ah la'aanta firfircoonida iyo baabi'inta suurtagalka ah iyadoo qandaraasyada hiddo-wadaha ay qandaraasyo, bacrimintu ay hoos u dhacayso, cilladaha aan caadiga ahayn ay kordhayaan iyo heerarka dhimashada oo sare u kacaya.
Go'doonka macmalka ah (taranka xulashada) wuxuu soo saaraa saameyn la mid ah. Markaad abuureyso nooc cusub oo ka soo jeeda isbeddel soo jiidasho leh, barkadda hidda-wadaha ayaa markii hore daruuri yar oo leh isku dhacyo badan oo u dhexeeya eeyaha la xiriira. Noocyada qaar oo ka dhashay isbadal lama filaan ah ayaa la soo dersay dhibaatooyin ay ka mid yihiin Bulldog. Dhibaatooyinka sida hip dysplasia iyo achalasia ee Jarmalka Shepherd iyo patella luxation waxay ku badan yihiin noocyada qaarkood iyo khadadka taranka marka loo eego kuwa kale, iyagoo soo jeedinaya in hiddo-dhaqameed hore u qaybiyay hiddo-wadayaasha cilladaysan. Xulitaanka marinnada ka baxsan ee habboon ayaa dib u soo celin kara hiddo-wadayaal caafimaad qaba, oo laga yaabo in haddii kale lumo, iyada oo aan saameyn xun ku yeelan nooca.
Xayawaanada ku hawlan barnaamijyada taranka maxaabiista ayaa ka warqaba baahida loo qabo in laga badiyo keydkooda gaarka ah xayawaanaadka laga soo uruuriyo ururada kale. Dadyowga la haysto waxay halis ugu jiraan in la kala-baxo madaama asxaab yar ay xayawaanku heli karaan, markaa xayawaanku waa inay amaahataan xayawaanka midba midka kale si loo ilaaliyo kala-duwanaanta hidde-wadaha ee carruurta.
Taranka xoolaha ayaa dhibaatooyin ku haya qof kasta oo ku lug leh dhaqashada xoolaha - laga soo bilaabo fanaaniinta canary ilaa beeraleyda. Isku dayga ah in la beddelo muuqaalka Pugga isku dayga ah in la yeesho waji sasabasho leh iyo madax wareeg ah ayaa keentay in loo baahdo qaybo badan oo C ah iyo dhibaatooyin kale oo ku dhasha. Qaar ka mid ah noocyadan ayaa luminaya awoodoodii dabiiciga ahayd ee ay ku umuli lahaayeen gargaar aadane la'aan.
Adduunyada eyga, noocyo fara badan ayaa hadda muujiya cilladaha la iska dhaxlo sababtoo ah xad-dhaafka loo yaqaan 'typey' haraaga oo markii dambe la ogaaday inuu sido hidda-wade waxyeello u leh caafimaadka. Waqtiga ay dhibaatooyinku soo if baxeen horay ayey u faafeen maaddaama biinleyda si ballaaran loogu adeegsaday 'hagaajinta' taranka. Waagii hore qaar ka mid ah noocyada waxaa looga gudbayay eeyo ka yimid noocyo kala duwan si loo wanaajiyo nooca, laakiin maalmahan xoogga la saaraa ilaalinta nadaafadda noocyada iyo ka fogaanshaha mongolka.
Kuwa ku lugta leh noocyada tirada yar (noocyada dhifka ah) ee xoolaha waxay la kulmaan xaalad jahwareer ah iyagoo isku dayaya inay isku dheellitiraan nadiifnimada ka hortagga halista u hoggaansamida hidde. Xamaasadu waxay ilaalisaa taranka tirada yar maxaa yeelay hidde-sideyaashoodu waxtar ayey u lahaan karaan beeralayda mustaqbalka, laakiin isla mar ahaantaana tirooyinka hoose ee ku lug lahaanshahu waxay ka dhigan tahay inay u nugul tahay inay caafimaad darro ku soo noqoto. Markaad isku dayeyso inaad ka soo cesho nooc ka mid ah ciribtirka, hordhaca 'dhiig cusub' iyada oo loo marayo isutag la'aanta nooc aan xiriir la lahayn ayaa badanaa ah meesha ugu dambeysa ee loo baahan yahay maxaa yeelay waxay beddeli kartaa dabeecadda aad u dhow ee ah in la ilaaliyo. Xolaha dhexdooda, jiilasha isdaba jooga ee faracyada waa in dib loogu celiyaa awoowe saafi ah ilaa lix ilaa sideed jiil ka hor inta aan loo aqoonsan karin faracooda laftiisa.
Eyga eyga, daahirnimada noocyadu waa isku mid suurad wacan, laakiin waxaa loo qaadan karaa dherer qosol ah. Fanaaniinta qaar ma aqoonsan doonaan noocyada 'hybrid' sida cad ama Parti-Schnauzer maxaa yeelay waxay soo saartaa noocyo kala duwan. Noocyada aan soo saari karin xoogaa kala duwanaansho ah oo ubadkooda ah ayaa halis ugu jira inay naftooda ku helaan xaalad la mid ah yeeyda iyo baandooyinka waaweyn. Kuwani waxay jecel yihiin noocan ah xaqiiqda ah inay diiwaangelinayaan eeyaha 'asal ahaan', ee aan ahayn eeyo 'nadiif ah', gaar ahaan maaddaama ay aqoonsan karaan noocyada u baahan mararka qaarkood in laga gudbo si loo ilaaliyo nooca!
Saamaynta ay ku yeelaneyso ku-noolaanshaha Taranka eeyga
Inta badan soosaarayaasha eygu waxay si fiican uga warqabaan dhibaatooyinka soo raaca ee la xiriira taranka cunugga in kasta oo ay tijaabinayso qof laylis ah inuu sii wado inuu isticmaalo hal ama laba khadad oo aad isugu dhow si loo ilaaliyo ama loo hagaajiyo nooca. Udabicista xarriijin aan isku xirneyn oo isla isir ah (meeshii ay suurta gal tahay) ama ku dhaafida nooc kale (meeshii loo oggol yahay) waxay xaqiijin kartaa xoog. In kasta oo ay jirto khatarta ah in la soo dhoofiyo astaamo yar oo aan fiicnayn oo laga yaabo in ay qaadato muddo in la soo baxo, xad-dhaafku wuxuu ka hortagi karaa in isbadalku istaago iyadoo la soo bandhigayo hiddo-wadeyaal cusub barkadda hidda-wadaha. Waxaa muhiim ah in laga gudbo eeyo kala duwan oo loo arko inay yihiin kuwo 'dhawaq' hiddo ahaan u leh (ma jirtaa mid ka mid ah carruurtoodii hore oo muujiya astaamo aan loo baahnayn?) Oo la doorbido inaysan si dhow isugu xirmin midba midka kale.
Sideed ku ogaan kartaa in nooc ama xariijin ay aad ugu dhowdahay inla barto? Hal calaamadood ayaa ah tan bacriminta oo hoos u dhacday lab ama dheddig. Eeyaha ragga ah waxaa lagu yaqaan inay leeyihiin heer bacrimineed oo hooseeya. Qiyaasaha qashinka yaryar iyo dhimashada eeyaha si joogto ah waxay muujinayaan in eeyaha ay aad isugu dhowyihiin. Luminta qayb badan oo eeyaha ah hal cudur ayaa tilmaamaysa in eeyaha ay lumayaan / lumiyeen kala duwanaanta nidaamka difaaca jirka. Haddii 50% shakhsiyaadka ku jira barnaamijka taranka ay u dhintaan infekshan fudud, waxaa jira walaac.
jack russell bulldog mix eeyo
Eeyaha aadka loo yaqaan ayaa sidoo kale si joogto ah u soo bandhiga waxyaabo aan caadi ahayn maadaama hiddo-wadayaasha 'xun' ay aad u faafaan. Cilladahaas aan caadiga ahayn waxay noqon karaan astaamo fudud oo aan loo baahnayn sida daamanka oo si qaldan loo qoondeeyay (qaniinyo xumo) ama cilladaha ka sii daran. Mararka qaar cillad ayaa lagu tilmaami karaa hal lab ama dhedig oo laga saari karo barnaamijka taranka xitaa haddii ay muujiso nooc gaar ah. Haddii faracyadiisii ​​hore ay durba tarmayaan waxaa soo jiidaneysa in laga fikiro 'Sanduuqa Pandora mar horaba wuu furan yahay dhaawaca soo gaarana markaa indhaha ayaan ka laabanayaa.' Diidmada khaladka iyo sii wadista ka dhalashada eyga waxay sababi doontaa hiddo-wadayaasha khaldan inay xitaa ku sii faafaan noocyada, taasoo sababi doonta dhibaatooyin hadhow haddii ay ku abtirsadaan si wada jir ah.
Bisadaha, hal nooc oo ku dhowaad lumay sababo la xiriira isugeynta ayaa ah Bobtail Mareykan ah. Kalkaaliyeyaasha aan khibradda lahayn ayaa isku dayay inay soo saaraan bisad midabbo leh oo midabbo leh oo leh kabo cad iyo olol cad oo run u ah nooca iyo midabka, laakiin kaliya waxay ku guuleysteen inay soo saaraan bisado aan caafimaad qabin oo leh dabeecad xumo. Kalkaaliye dambe ayaa ku qasbanaaday inuu dhaafo bisadaha yar-yar ee laf-dhabarta ah ee ay qaadatay, isla mar ahaantaana ka tanaasulayso xeerarka xukumaya midabka iyo qaabka, si loo soo saaro bisadaha waaweyn ee adag ee jaangooyada loo baahan yahay iyo inuu ku helo nooc ku habboon raad-raac hidde ah. .
Taransigu waa seef laba af leh. Dhinaca kale qadar cayiman oo ah isugeynta ayaa hagaajin karta oo hagaajin karta nooca si loo soo saaro xayawaan tayo sare leh. Dhinaca kale, ku-noolaanshaha xad-dhaafka ahi wuxuu xadidi karaa barkadda hiddo-wadaha si noocyadu u lumiyaan xooggooda. Taranka noocyada hore ee horumarka ayaa ugu nugul maadaama ay tiradu yartahay oo eeyadu ay aad isugu dhowyihiin midba midka kale. Waxay ku xiran tahay abuureha mas'uulka ka ah inuu isku dheellitiro ku-tallaalidda isgoysyada eeyaha aan la xiriirin si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee khadka ama nooca ay khusayso.
Xuquuqda daabacaadda 1996, Sarah Hartwell
Waxaa laga soo qaatay ogolaansho ka timid CatResource Archive
Caawinta iyo Korinta Eeyaha, Taranka, Soo-saarista iyo Muujinta
Whelping Main menu
rottweiler jack russell terrier mix
qas sanka cas iyo isku darka shaybaarka
Liiska eyda eyda
alaskan malaamute iskudhaf dhallaanka dahabiga ah eey
yorkie iyo isku dhafka pinscher mini
pomeranian sheltie waxay isku qasan yihiin eeyo yaryar oo iib ah